Isbaarooyinkii ugu badnaa oo la soo dhigay inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Marka (Warbixin) | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Isbaarooyinkii ugu badnaa oo la soo dhigay inta u dhaxeysa Muqdisho iyo...
Isbaarooyinkii ugu badnaa oo la soo dhigay inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Marka (Warbixin)
Isbaarooyinkii ugu faraha badnaa ayaa saacadihii u dambeeyay la soo dhigtay inta u dhaxeysa magaalada Muqdisho iyo Marka, iyadoo isbaarooyinkan ay wadada u yaalaan Ciidamo ka tirsan milateriga Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan wararka isbaarooyinkan ayaa waxay yihiin kuwo taako-taako ay wadada ugu taalo ciidamo labisan dareyska milateriga, kuwaasoo lacago baad ah ka qaadaya gaadiidka.
Halka ugu badan ee Isbaarooyinkan ay yaalaan ayaa ah deegaanka Muuri ilaa afaafka hore ee magaalada Marka, waxaana gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano BL-ka looga qaadayaa lacago fara badan.
“Walahi Isbaarooyinkan waxay yaalaan dalcada Marka, Buufow, Muuri, Km50, Ceel-wareegow ilaa Marka waxay u yaalaan ciidamada dowladda, waxaa gaadiidkiiba looga qaadayaa lacag dhan 150-200 shiling Somali, hadii ay diidaan wax ala wixii gaadiidka saaran ee dadka wataan ayaa laga qaadanayaa”ayuu yiri Darawal ka mid ah kuwa ka shaqeeya wadadaas.
Darawalada gaadiidka ayaa qaarkood bilaabay shaqo joojin, iyadoo maanta wadada aheyd mid gaadiidka ay aad ugu yareyd, maadaama isbaarooyinka ay soo kordheen, waxaana arrintan ay saameyn ku yeelatay dadkii isaga kala gooshayay Gobolka Banaadir iyo Shabellaha Hoose.
Qaar ka mid ah darawalada ayaa sheegay in markii Al-Shabaab ka talinayeen deegaanadaas aanay wax isbaaro ah jirin, hase ahaatee markii ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM la wareegeen ay dhibaatada ku soo korodhay.
“Al-Shabaab isbaaro ma dhigan jirin, ka bilow Muqdisho ilaa Dhoobley si ammaan ah ayaa gaadiidka ku marayay, meel lagu joojinayay ma jirin, warqada uu ka goosta koontaroolka ugu soo horeeya ayuu intaas oo dhan ku marayay”ayuu yiri darawal qariyay magaciis oo sababo ammaan awgood.
Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegay in uusan wax ka qaban karin, isla markaana ay u caal waayeen dhibaatadan wadada ku soo korortay iyo amni xumada ka jirta wadada u dhaxeysa Muqdisho ilaa Marka.
Shalay ayay aheyd markii gaadiidka isaga kala goosha wadada isku xirta Muqdisho ilaa Wanlaweyn ay sameeyeen shaqo joojin, iyagoo ka cabanayay isbaarooyin hor leh oo wadada la soo dhigtay, kaasoo lacago sharci daro looga qaado.
Previous articleNawas Shariif ayaa sheegtey in uu ku guuleystey Doorashadii Pakistan
Next articleFilim xiiso Badan oo laga sameeyaay Tahriibka Soomaaliya ee Yurub Daawo Muuqaalka Filimka